Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanamboaran-dalana : Izay misy hohanina ihany no mahamaika e !
Fanamboaran-dalana : Izay misy hohanina ihany no mahamaika e !
Ambara mandrakariva fa ny lalana no toy ny lalandra amin’ny tenan’olombelona miantoka ny ain’ny firenena iray. Izany hoe raha olombelona ratsy lalan-dra dia mety tsy haharitra ny fahavelomany. Toraka izany koa ny anjara-toeran’ny lalana eo anivon’ny fiainam-pirenena iray.
Tato anatin’ny herinandro aloha izao dia lanonana lehibe ara-panjakana roa momba ny fanombohan’ny tetik’asa fanamboaran-dalana no nataon’ny fitondram-panjakana ka ny filohampirenena Rajoelina mihitsy no tonga nanasongadin-tena tamin’izany. Ny voalohany dia ilay fanombohan’ny asa fanamboarana ilay “lalana migodana” mampitohy ny seranan-tsambon’i Toamasina amin’ny lalampirenena faharoa any Toamasina. Eo amin’ny 10 Km eo ny halavan’izy io, ka ny tanjona dia ny fanamaivanana ny fitohanana na fikatsoan’ny fifamoivoizana ao an-drenivohitr’i Toamasina.
Ny lanonana faharoa dia ny natao tamin’ny sabotsy teo tany Ambilobe satria natomboka tamim-pomba ofisialy koa ny lalampirenena faha-5A mampitohy an’Ambilobe amin’i Vohemar.
Samy tetik’asa iarahana amin’ny fitondram-panjakana sinoa ireo.
Ny tsy aritra koa anefa dia ny fikojakojana ny lalana hatrizay.
Tsara tokoa ny manomboka asa famakiana lalana vaovao fa tsy tokony ho latsa-danja ny fikojakojana ny lalana efa nisy, indrindra fa ireo tena fitaterana ny entana sy akora miantoka ny toekarem-pirenena. Iray ary voalohany amin’izany ny lalampirenena faharoa mampitohy an’Antananarivo amin’i Toamasina.
Raha ny hita aloha amin’izao fotoana dia simba ny ampahany betsaka amin’io lalampirenena faharoa io. Lavadavaka saika manemitra azy. Ny fiara mifamoivoy amin’izy io anefa isanandro, sady marobe no mavesatra ny ankamaroany satria mitondra entana miaka-midina.
Ny dikan’izany, raha vao misy fahasimbana kely dia tsy ela akory raha tsy voamboatra dia efa miitatra be.
Raha nalaina ora 6, mandeha miadana, ny lalampirenena faharoa hatrizay, tsy vita izy amin’izao fotoana raha tsy ora 8 na mahery. Tombontsoan’iza izany ary faty antok’iza? Moa tsy an’ny firenena ny fahavoazana?
Asa aloha fa toa tsy fantatry ny mpitondra akory izany satria ry zalahy fiaramanidina an’olon-tsotra (jet privé) na fiaramanidina helikaoptera no andehanany rehefa mandeha miala ny lapam-panjakana ry zalahy dia honohono fotsiny no reny, ka matetika no tsy ivakiany loha.
Jereo fa mailaka sy dodona ery ny mpitondra mikarakara lanonam-panjakana izahozahoana rehefa fanamboaran-dalana vatsian’ny avy any ivelany vola no hatao. Volabe tokoa aloha no mikoriana amin’ireo lalana roa noresahina etsy aloha ireo. Mahatratra 1 Tapitrisa dolara ny km iray. Aoka hotsorina fa “misy kopaka isasahana manara-penitra” amin’izy ireny e!
Etsy ankilany, ny tahiry hikojakojana ny lalàna (fonds d’entretien routier = Fer) indray dia tsy fantatra koa ny nihafarany satria toa tsy hita soritra any anatin’ny tetibolam-panjakana amin’ity taona 2019 ity, hono izany. Dia ho gaga ve isika raha tsy mivaky loha amin’izay fikojakojana ny lalana efa nisy ny fitondrana? Ka tsy misy “hohanina” ao ka inona no ndeha handrerahan-tena amin’izany?
Io lalampairenena faharoa mampitohy an’Antananarivo amin’i Toamasina io aloha no noresahina satria io no maro mpampiasa indrindra saingy tsy tokony hadinoina fa voa mafy lavitra noho io lalampirenena faharoa io ny lalana hafa manerana ny Nosy. Satria koa tsy misy “hohanina” e!